पोखरा । ‘अहिले सम्झँदा अचम्म लाग्छ, एउटा गाउँको मध्यम वर्गीय किसान परिवारकी छोरी मैले हिमाल चढ्ने सपना कहिल्यै देखेकी थिइनँ‚ तर आज पाँच–पाँचवटा हिमालको चुचुरोमा पुग्न सफल भएँ । हिमाल आरोहणको यात्रा आफ्नै लागि समेत एक किसिमले ‘सरप्राइज’ भयो ।’
एकपछि अर्को सफलता हासिल गर्दै हिमाल आरोहीका रुपमा आफ्नो परिचय स्थापित गर्न सफल फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठको अनुभव हो यो । श्रेष्ठले यही असोज १५ (अक्टुबर १) मा धौलागिरि हिमाल आरोहण गर्न सफल भएकी हुन् । उनीसँगै अर्का आरोही महिला पासाङल्हामु शेर्पाले पनि धौलागिरि हिमाल आरोहण गरी प्रथम महिला आरोहीको सूचीमा आफूलाई पार्न सफल भइन् ।
फरक पृष्ठभूमिबाट पनि लगातार हिमालको चुचुरोमा पुगेर कीर्तिमान राख्न सफल उनले खुसी साट्ने क्रममा भनिन्, ‘जीवनमा सधैँ सोचेको र देखेको सपनाबाट मात्र सफल भइन्छ भन्ने होइन रहेछ, मैले हिमाल चढ्ने सपना देखेकी थिइनँ‚ तर फरक क्षेत्रबाट आफूलाई स्थापित गर्छु भन्ने सोचले चुचुरोतिर पुर्‍यायो र सफल पनि बनायो ।’
अहिले बटुलेका खुसीहरूसँग रमाइरहँदा उनी आफ्नो बाल्यकाल र विगततिर पनि फर्किइन् । ‘म घरभित्रको काममा रमाउँथे, कसैले कहीँ घुम्न जाऊँ भन्दा पनि घरमा खाना पकाउनुपर्छ भनेर बसिरहन्थेँ, घर सफासुग्घर राख्न खुबै मन पर्थ्यो, आज म चुल्होबाट चुचुरोमा पुग्न सफल भएँ, मेरो सफलतामा साथीहरू पनि दङ्ग छन् ।’ आफूलाई सधैँ चुनौतीको सामना गर्न मनपर्ने पूर्णिमालाई आफ्नो अनुभव नै नभएको क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलताले यतिखेर दङ्ग बनाएको छ ।
गोर्खा आरुघाटमा मध्यम किसान परिवारमा जन्मिएकी पूर्णिमा २०६४ सालमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौँ पुगिन् । काठमााडौँको त्यही भीडबाटै पूर्णिमाले आफूलाई फरक पहिचानको खोजीमा व्यस्त बनाइन् । बुबा आमाको सपना थियो‚ छोरी टेलिभिजनमा समाचार पढेको हेर्ने‚ तर छिटो बोल्ने, अशुद्ध पनि भएकाले पूर्णिमाले टेलिभिजनको पर्दामा आफूलाई सफल हुन नसक्ने निष्कर्ष आफैँ निकालिन् । उनमा पत्रकारिताको हुटहुटी पनि चलिरहेकै थियो । त्यसैले फुड एन्ड वाइन म्याग्जिनमा समाचारदाताका रुपमा काम गर्न सुरु गरिन् ।
समाचारदाताहरुको पनि भीड नभएको कहाँ हो र ? तर त्यो भीड पनि छिचोल्दै जाँदा पत्रकारितामा महिला फोटो पत्रकार धेरै नभएको र तुलनात्मक रुपमा जोखिमपूर्ण पेसा लागेपछि यसबाट आफ्नो पहिचान बनाउने अभ्यासमा जुटिन् पूर्णिमा । कर्ममा विश्वास गर्ने र मिहिनेत गर्ने बानीले होला‚ पत्रकारिकातामा पैसा हुँदैन भन्नेहरुका लागि पनि गतिलो उदाहरण बन्ने हिम्मत पूर्णिमामा पलाइरहेको थियो ।
‘म काममा विश्वास गर्छु, त्यसैले पनि मिडियामा केही हुन्न भन्नेका लागि आफ्नै कमाइमा पनि स्तरीय जीवन व्यतित गरेर देखाँउछु भन्ने लाग्थ्यो,’ उनी भन्छिन् । पूर्णिमाले आफ्नै पारिश्रमिकबाट तीन लाख रुपैयाँको क्यामेरा किनिन् । यसै सिलसिलामा सन् २०१७ मा ईन्जा रिपोर्टिङ्गमा गएकी साथी सृष्टि काफ्लले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सौन्दर्यको बयान गरिदिएपछि पूर्णिमालाई त्यति नै बेला उडेरै सगरमाथ पुगूँझैँ लाग्यो‚ तर आरोहीका रुपमा होइन‚ फोटो पत्रकारका रुपमा ।
उनलाई मोह जाग्यो, कहिले हिमालमा पुगूँला र सुन्दर दृश्य क्यामेरामा कैद गरूँ भनेर । अब उनले सगरमाथा बेसक्याम्प पुग्ने बाटोहरूको खोजी गर्न थालिन् । सन् २०१७ मा एभरेस्ट म्याराथन गराउने कम्पनीका सञ्चालक विक्रम पाँणेकाजीलाई पाँच महिनाअघि देखि नै सम्पर्क गरिन् । आफू ‘अफिसियल फोटोग्राफर’का रुपमा त्यहाँ पुग्न चाहेको र जसरी पनि सहभागी गराउन अनुरोध गरेपछि आयोजकले दुब्ली पातली पूर्णिमालाई विभिन्न कठिनाइ देखाइरहे‚ तर उनको आत्मविश्वासको अगाडि कम्पनी पनि बाध्य भयो । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनीले उनलाई बेसक्याम्पसम्मको कार्यक्रममा सहभागी गरायो ।
मनमा हिमाल उक्लने चाहनाहरू बढ्न थाल्यो । हिमाल आरोहणका बारेमा सिक्न र जान्न मन लाग्न थाल्यो । एक दिन साथीभाइमाझ सगरमाथा चढ्छु भन्दा आफू हाँसोको पात्रसमेत बनेको उनी सम्झिन्छिन् । ‘स्वाभाविक पनि हो‚ बेसक्याम्पको यात्रा छिचोल्न निकै सास्ती भएर घोडाको सहारा लिनु परेको मान्छे सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्छु भन्दा पत्याउने कुरै भएन,’ उनी सम्झन्छिन् ।
धेरैले उनलाई हिमाल आरोहणमा सोचे जसरी प्रेरित भने गरेनन् । किन चढ्ने हिमाल ? हिमाल चढेर के हुन्छ ? भन्नेको सङ्ख्या निकै धेरै थियो‚ तर त्यसको उत्तर उनीसँग थिएन । फेरि त्यसबीचमा निकै कमले मात्र भित्री इच्छालाई बुझेर त्यो आँटलाई पूरा गर्नुपर्छ भनेर हौसला दिन्थे । पूर्णिमाले आफ्नो चाहना पूरा गर्ने प्रयास जारी राखे । उनलाई ननिदाई देख्ने सपनाको नशा लागिसकेको थियो । त्यसैले त्यो सपना पूरा गर्न उनी कयौँ रात जागै बसेकी छन् ।
दिनदिनै जागेको यही भोक मेटाउन एक दिन हिमाल आरोहण कम्पनीको मानिसलाई आफ्नो सगरमाथा चढ्ने इच्छा सुनाइन् । सगरमाथा चढ्नुअघि ६ हजार मिटर चुचुरो चढ्नुपर्ने सुझाव पाएपछि उनी त्यसको तयारीतिर लागिन् । ‘मलाई यसरी तालिमबिना नै सहजै हिमाल चढ्छु, भन्ने आँट कसरी आयो होला ?’ यो आफ्नै प्रश्नको जवाफ उनले अहिलेसम्म पनि पाएकी छैनन् । उनी अहिले पनि अनुत्तरित प्रश्नमै रोकिन्छिन् ।
आर्थिक पाटोको समस्या पनि उस्तै थियो । यसबीचमा आफू अध्ययरत स्कुलका भाइबहिनीले खाजा रकम जोगाएर दिएको सहयोग रकमदेखि साथीहरुले आफ्नो रहर पैसाले रोक्नु हुँदैन भन्दै दिएको ऋणसम्म गरेर चार लाख रुपैयाँ, विभिन्न शुभचिन्तकबाट प्राप्त साथ सहयोग र शुभेच्छाले मानसिक रुपमा त उनले चुचुरो चढिसकेकी थिइन् । सशरीर मात्र त्यहाँ पुग्न बाँकी थियो । अन्ततः आमा बुबादेखि सम्पूर्णको आशीर्वाद लिएर सन् २०१७ सेप्टेम्बर पहिलो हप्ता मनास्लु हिमाल आरोहण दलमा सहभागी भएर चुचुरोतिर उनका पाइला लम्के ।
विभिन्न कठिनाइ हन्डर र ठक्कर सबैको अनुभव बटुल्दै २२ दिनमा उनी असोज १२ गते (सेप्टेम्बर २६) सन् २०१७ मा पहिलोपल्ट आठ हजार एक सय ६३ मिटरको मनास्लु हिमालको चुचुरोमा पुग्न सफल भइन् । जीवनको पहिलो हिमाल आरोहणको अनुभव उनले मनास्लु हिमालबाट लिइन् । त्यसपछि उनको आत्मविश्वास हिमालजस्तै अग्लिँदै गयो । सन् २०१८ मे १९ मा पूर्णिमाले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरिन् । त्यसैगरी सन् २०२१ अप्रिलमा अन्नपूर्ण प्रथम र २०१९ नोभेम्बर १० आमादब्लम हिमालको सफल आरोहणको अनुभव बटुलिन् ।
धौलागिरि हिमाल उनी दोस्रो प्रयासमा सफल भइन् । ‘हिमाल आरोहण मृत्यु बोकेर हिँडेको यात्रा हो, कति बेला कहाँ के हुन्छ थाहा छैन‚ तर त्यही जोखिम र चुनौतीबीच प्राप्त खुसी र आनन्द सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो,’ श्रेष्ठले भनिन् । ‘हिमाल चढेको खुसी सम्झिरहँदा यसको ऋण सकेसम्म नसम्झनु परे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ,’ उनले साथीभाइसँग ऋण लिएर हिमाल चढेको र कम्पनी र गाइडलाई बुझाउने पैसाको अभाव भएको प्रसङ्ग पनि जोड्न छुटाइनन् ।
धनभन्दा अघि मन सारेर बटुलेको इच्छाशक्तिले आरोहणमा सफलता मिलेको स्मरण गर्दै उनले हिमाल चढ्दाका प्रत्येक पाइला याद रहेको बताइन् । ‘जति मिहिनेत गर्‍यो, उत्ति सफलता हात पर्छ, भन्ने यथार्थ भोगाइलाई आत्मसात् गर्न पाएँ,’ श्रेष्ठले भनिन् । उनले यसअघि अन्नपूर्ण प्रथम आरोहण गर्नुपूर्वको तयारी राम्रो भएकाले आर्थिक बोझ कम भएको सुनाइन् । ‘अन्नपूर्ण प्रथमका लागि प्रदेश सरकारको पनि सहयोग रहेकाले दिल खोलेर खुसी साट्न पाएको थिएँ‚ तर अहिले धौलागिरि हिमाल भने ऋणमै पुगेर आएँ,’ उनले भनिन्‚ ‘उमेर छ समय पनि छ, कुनै दिन तिर्न सकूँला नि भनेर बसेकी छु ।’ उनले सबैको जीवनमा एउटा-एउटा सगरमाथा हुने र त्यो चढ्न निकै गाह्रो हुने अनुभव सुनाइन् ।
आफ्नो जीवनमा हिमाल नै ऊर्जा भएकाले अब जस्तै कठिन अवस्था आए पनि सहजै पार लगाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढेको उनको भनाइ छ । यतिखेर सफलतामा आएका समाचार र साथीभाइका शुभकानामा पनि आफ्नो १० लाख ऋण भने भित्रभित्रै सम्झिरहने उनी बताउँछिन् ।
हिमाल आरोहणको यात्रामा आफू नथाक्ने यात्री भएकाले निरन्तरता दिने योजना उनको छ । नेपालका आठ हजार मिटरभन्दा माथिका कञ्चनजङ्घा, ल्होत्से र मकालु एकै याममा चढ्ने योजना बनाइरहेकी श्रेष्ठले किलर माउन्टेन भनेर चिनिने केटु हिमाल भने साँचेर राख्ने र चढ्न हतार नगर्ने बताइन् । ‘केटू हिमाल साँचेर राखेको सपना हो, हतार गर्दिनँ,’ उनले भनिन् । पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेकि श्रेष्ठले आफूभित्रको विशेष क्षमताको समयमै पहिचान गर्न आफू सफल भएको बताइन् ।
नेपालको पर्यटनलाई अन्तरराष्ट्रिय जगतमा ब्रान्डिङ गर्न पर्वतारोहण पर्यटनलाई जोड दिन उनको सुझाव छ । नेपालमा रहेका अनगिन्ती चुचुरोहरू प्रचारप्रसारको अभाव ओझेलमा रहेको बताउँदै सरकारले देशका हरेक हिमालको पहिचान र परिचयबाहिर ल्याएर विशेष नीति निर्माणसहित यसको प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिन्छिन् ।
लाङटाङ र गोसाइँकुण्डको रोमाञ्चकारी पदयात्रामा निस्कने होइन ?
धनगढी विमानस्थल अवरुद्ध, समिटको जहाजमा समस्या
निर्माणाधीन पोखरा एयरपोर्टमा पहिलो पटक हेलिकोप्टर ल्यान्ड, प्रधानमन्त्री देउवाले गरे निरीक्षण
दशैँ तिहार बिदामा सगरमाथा आधार शिविर जाँदै हुनुहुन्छ ? जानिराख्नुस् यी सात कुरा